လီဗာပူးလျကို ဆာလားအတှကျ အာဆငျနယျနဲ့ အူဘာလမျးစဉျမလိုကျဖို့ ဂန်ထဝငျ သတိပေး – Sports A2Z
လီဗာပူးလျကို ဆာလားအတှကျ အာဆငျနယျနဲ့ အူဘာလမျးစဉျမလိုကျဖို့ ဂန်ထဝငျ သတိပေး
လီဗာပူးလျအသငျးအနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ အဓိကတိုကျစဈမှူး မိုဟာမကျ ဆာလားအတှကျ လိုအပျတာထကျပိုပွီး လစာငှကွေေး မသုံးစှဲသငျ့ကွောငျး အသငျးအတှကျ ပှဲပေါငျး ၃၀၀ နီးပါး ကစားပေးခဲ့တဲ့ ဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူး မိုကျကယျ အိုဝငျက ကနျ့ကှကျလိုကျပွီး အာဆငျနယျနဲ့ အူဘာမီယနျးတို့ရဲ့ အဖွဈကို သငျခနျးစာယူပွီး အမှားမကြူးလှနျဖို့ သတိပေးလိုကျပါတယျ။
အီဂဈြသားအနနေဲ့ မာဆေးဆိုကျအခွစေိုကျ အနီရောငျတှနေဲ့ နှရောသီကတညျးက စာခြုပျသဈခြုပျဖို့ စကားပွောခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ တဈပတျကို ပေါငျငါးသိနျးအထိ အလိုရှိနတောကွောငျ့ အသငျးနဲ့ အဆငျမပွခေဲ့သလို အနာဂတျအတှကျလညျး မရမေရာဖွဈနပွေီး ခွစှေမျးပုံမှနျမရမှုတှမှောလညျး ဒါက အကွောငျးအရာတဈခုလို ဖွဈနခေဲ့တာပါ။
နှဈနှဈအောကျမှာသာ ကနျြရှိတော့တဲ့ စာခြုပျကို သကျတမျးတိုးဖို့အတှကျတော့ လီဗာပူးလျအတှကျ ၁၅၈ ဂိုး ရှာဖှပေေးထားခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျတိုကျစဈမှူးဟောငျးက စိုးရိမျနပွေီး ဆာလားတောငျးတဲ့အတိုငျး ပေးလိုကျမယျဆိုရငျ အာဆငျနယျနဲ့ ဂါဘှနျသားလို ဖွဈလာခဲ့ရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲဆိုပွီး မေးခှနျးထုတျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ နှဈရာသီဆကျတိုကျ ၂၂ ဂိုးသှငျးယူပေးအပွီးမှာ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှူး ပယျြ-အမျမရိချ အူဘာမီယနျး လိုခငျြတဲ့အတိုငျး ပေးလိုကျတဲ့ စာခြုပျနောကျပိုငျး ကစားသမားအနနေဲ့ ခွစှေမျးမပွနိုငျတော့သလို သူ့ရဲ့ ကွီးမားတဲ့ လုပျခအတှကျလညျး ပရိသတျတှကေ မကမြေနပျဖွဈနကွေပွီး အသငျးမှာ လစာညာယူနတေယျလို့ စှပျစှဲမှုတှပေါ ရှိလာခဲ့တာပါ။
အသကျ ၃၂ နှဈအရှယျမှာ ဥရောပအသငျးကွီးတှဆေီ ပွောငျးရှပွေီ့း အောငျမွငျမှု မရှာနိုငျတော့တဲ့ ဂါဘှနျသားအတှကျ အာဆငျနယျဟာ မလှုပျမရှုပျမပွုတျလုပျဖို့ အကောငျးဆုံးနရောဖွဈပွီး လကျကနျြစာခြုပျသကျတမျးမှာ တဈပတျ သုံးသိနျးခှဲ ထိုငျယူနဖေို့နဲ့ အသငျးရှုံးနလေညျး ကှငျးထဲမှာ ကပ်ပတိနျလကျပတျကွီးနဲ့ ဟီးဟီးဟားဟားလုပျနလေို့ အဆငျပွနေတောလညျးဖွဈပါတယျ။
“လူတှကေတော့ ဆာလားဟာ အသငျးရဲ့ အဓိက ဂိုးသှငျးရှငျဖွဈလို့ လူတှကေ သူလိုခငျြတာ ပေးလိုကျပါလို့ ပွောမှာ အမှနျပဲ။ ဒါပမေယျ့ အသငျးဘကျက ကွညျ့ရမယျလေ… တဈခုခု မှားယှငျးတာနဲ့ အသငျးရဲ့ တညျဆောကျပုံက ပကျြပွားသှားနိုငျပါတယျ။ သူ့ကို ဗနျဒိုကျရဲ့ လစာနှဈဆအထိ ပေးလိုကျမယျဆိုရငျ လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာ ဘာတှဖွေဈသှားနိုငျသလဲဆိုတာမြိုးပေါ့…”
“ကြှနျတျောတို့တှအေနနေဲ့ အာဆငျနယျနဲ့ အူဘာမီယနျး ဘာဖွဈသှားသလဲ လကျတှေ့ မွငျထားခဲ့ကွရတာပါ။ သူလိုခငျြတာ ပေးလိုကျတော့ အခု ဘာဖွဈသှားသလဲ? ဒါက သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝအတှကျ နောကျဆုံးအနနေဲ့ အကွီးမားဆုံး ရရှိနိုငျတဲ့ ပမာဏပါ။ ဒါကွောငျ့ ဘာပဲဖွဈဖွဈ အဲဒီမှာ ကြောကျခနြပွေီး အပတျတိုငျး ဘာပဲဖွဈဖွဈ သူစိတျမဝငျစားတော့ဘူးလေ”လို့ ပွိုငျဘကျဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့ အသငျးကို အိုဝငျက ထောကျပွလိုကျပါတယျ။
လီဗာပူးလျအသငျးအနနေဲ့ ဆာလားကို အလှယျတကူ လကျလှတျသှားဖို့က ဘဏ်ဏာရေးအရရော လိုအပျမှုအရပါ မဖွဈနိုငျသေးဘဲ အသငျးရဲ့ ဒိုငျခံဂိုးသှငျးသူဖွဈနတေဲ့ ၂၉ နှဈသားအနနေဲ့ ဒီရာသီမှာ ၅ ပှဲကစားပွီး ၄ ဂိုးသှငျးယူထားပေးခဲ့ခြိနျမှာ သူ့ကို အစားထိုးနိုငျမယျ့သူမြိုးကိုလညျး ကိုဗဈအလှနျမှာ ငှကွေေးမွငျ့မွငျ့မားမား သုံးစှဲချေါယူဖို့ မဖွဈနိုငျသေးတာပါ။
“ဆာလားအနနေဲ့ လီဗာပူးလျရဲ့ လစာအမြားဆုံးတော့ ဖွဈလာနိုငျပမေယျ့ သူတောငျးတာမြိုးတော့ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ အသငျးနဲ့ သူနဲ့ ကွားက ရှဉျ့လဲလြှောကျသာ ပြားလဲစှဲသာစမေယျ့လမျးကို ရှာဖှသှေားမှာဖွဈပွီး သငျ့တျောပွီး ဖွဈနိုငျတယျ့ ပမာဏမြိုးမှာ သဘောတူညီသှားနိုငျဖို့တော့ လီဗာပူးလျဘကျက လုပျသငျ့ပါတယျ”လို့ အိုဝငျက သုံးသပျသှားပါတယျ။
BT Sport မှာ ဖှငျ့ဟလိုကျတဲ့ အိုဝငျကို တှဲဖကျ ရီယို ဖာဒီနနျကလညျး ထောကျခံဆှေးနှေးသှားပွီး ဆာလားကို သူတောငျးတဲ့အတိုငျး ပေးလိုကျရငျ သူ့ရှကေ့ မကွာခငျမှ စာခြုပျခြုပျထားတဲ့ အဓိက ကစားသမားတှဖွေဈကွတဲ့ ကှငျးလယျလူ ဖာဘငျညိုနဲ့ နောကျခံလူ ထရငျ့ အလကျဇနျးဒါး-အာနိုးလျဒျတို့ရဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာကိုလညျး ထိခိုကျစနေိုငျကွောငျးနဲ့ လီဗာပူးလျအနနေဲ့ အီဂဈြသားကို အနျးဖီးလျမှာ ဆကျလကျထိနျးသိမျးသငျ့ပမေယျ့ တရားလှနျလိုကျလြောမှုမြိုးတော့ မလုပျသငျ့ကွောငျး ပွောကွားသှားခဲ့တယျလို့ သိရှိရပါတယျ။
ZAWGYI: လီဗာပူးလ်အသင်းအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အဓိကတိုက်စစ်မှူး မိုဟာမက် ဆာလားအတွက် လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး လစာငွေကြေး မသုံးစွဲသင့်ကြောင်း အသင်းအတွက် ပွဲပေါင်း ၃၀၀ နီးပါး ကစားပေးခဲ့တဲ့ ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူး မိုက်ကယ် အိုဝင်က ကန့်ကွက်လိုက်ပြီး အာဆင်နယ်နဲ့ အူဘာမီယန်းတို့ရဲ့ အဖြစ်ကို သင်ခန်းစာယူပြီး အမှားမကျူးလွန်ဖို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
အီဂျစ်သားအနေနဲ့ မာဆေးဆိုက်အခြေစိုက် အနီရောင်တွေနဲ့ နွေရာသီကတည်းက စာချုပ်သစ်ချုပ်ဖို့ စကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် တစ်ပတ်ကို ပေါင်ငါးသိန်းအထိ အလိုရှိနေတာကြောင့် အသင်းနဲ့ အဆင်မပြေခဲ့သလို အနာဂတ်အတွက်လည်း မရေမရာဖြစ်နေပြီး ခြေစွမ်းပုံမှန်မရမှုတွေမှာလည်း ဒါက အကြောင်းအရာတစ်ခုလို ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
နှစ်နှစ်အောက်မှာသာ ကျန်ရှိတော့တဲ့ စာချုပ်ကို သက်တမ်းတိုးဖို့အတွက်တော့ လီဗာပူးလ်အတွက် ၁၅၈ ဂိုး ရှာဖွေပေးထားခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှူးဟောင်းက စိုးရိမ်နေပြီး ဆာလားတောင်းတဲ့အတိုင်း ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် အာဆင်နယ်နဲ့ ဂါဘွန်သားလို ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ နှစ်ရာသီဆက်တိုက် ၂၂ ဂိုးသွင်းယူပေးအပြီးမှာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ပျယ်-အမ်မရိခ် အူဘာမီယန်း လိုချင်တဲ့အတိုင်း ပေးလိုက်တဲ့ စာချုပ်နောက်ပိုင်း ကစားသမားအနေနဲ့ ခြေစွမ်းမပြနိုင်တော့သလို သူ့ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ လုပ်ခအတွက်လည်း ပရိသတ်တွေက မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြပြီး အသင်းမှာ လစာညာယူနေတယ်လို့ စွပ်စွဲမှုတွေပါ ရှိလာခဲ့တာပါ။
အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်မှာ ဥရောပအသင်းကြီးတွေဆီ ပြောင်းရွှေ့ပြီး အောင်မြင်မှု မရှာနိုင်တော့တဲ့ ဂါဘွန်သားအတွက် အာဆင်နယ်ဟာ မလှုပ်မရှုပ်မပြုတ်လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပြီး လက်ကျန်စာချုပ်သက်တမ်းမှာ တစ်ပတ် သုံးသိန်းခွဲ ထိုင်ယူနေဖို့နဲ့ အသင်းရှုံးနေလည်း ကွင်းထဲမှာ ကပ္ပတိန်လက်ပတ်ကြီးနဲ့ ဟီးဟီးဟားဟားလုပ်နေလို့ အဆင်ပြေနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
“လူတွေကတော့ ဆာလားဟာ အသင်းရဲ့ အဓိက ဂိုးသွင်းရှင်ဖြစ်လို့ လူတွေက သူလိုချင်တာ ပေးလိုက်ပါလို့ ပြောမှာ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် အသင်းဘက်က ကြည့်ရမယ်လေ… တစ်ခုခု မှားယွင်းတာနဲ့ အသင်းရဲ့ တည်ဆောက်ပုံက ပျက်ပြားသွားနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို ဗန်ဒိုက်ရဲ့ လစာနှစ်ဆအထိ ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်သလဲဆိုတာမျိုးပေါ့…”
“ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ အာဆင်နယ်နဲ့ အူဘာမီယန်း ဘာဖြစ်သွားသလဲ လက်တွေ့ မြင်ထားခဲ့ကြရတာပါ။ သူလိုချင်တာ ပေးလိုက်တော့ အခု ဘာဖြစ်သွားသလဲ? ဒါက သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝအတွက် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အကြီးမားဆုံး ရရှိနိုင်တဲ့ ပမာဏပါ။ ဒါကြောင့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီမှာ ကျောက်ချနေပြီး အပတ်တိုင်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးလေ”လို့ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အသင်းကို အိုဝင်က ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။
လီဗာပူးလ်အသင်းအနေနဲ့ ဆာလားကို အလွယ်တကူ လက်လွှတ်သွားဖို့က ဘဏ္ဏာရေးအရရော လိုအပ်မှုအရပါ မဖြစ်နိုင်သေးဘဲ အသင်းရဲ့ ဒိုင်ခံဂိုးသွင်းသူဖြစ်နေတဲ့ ၂၉ နှစ်သားအနေနဲ့ ဒီရာသီမှာ ၅ ပွဲကစားပြီး ၄ ဂိုးသွင်းယူထားပေးခဲ့ချိန်မှာ သူ့ကို အစားထိုးနိုင်မယ့်သူမျိုးကိုလည်း ကိုဗစ်အလွန်မှာ ငွေကြေးမြင့်မြင့်မားမား သုံးစွဲခေါ်ယူဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးတာပါ။
“ဆာလားအနေနဲ့ လီဗာပူးလ်ရဲ့ လစာအများဆုံးတော့ ဖြစ်လာနိုင်ပေမယ့် သူတောင်းတာမျိုးတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အသင်းနဲ့ သူနဲ့ ကြားက ရှဥ့်လဲလျှောက်သာ ပျားလဲစွဲသာစေမယ့်လမ်းကို ရှာဖွေသွားမှာဖြစ်ပြီး သင့်တော်ပြီး ဖြစ်နိုင်တယ့် ပမာဏမျိုးမှာ သဘောတူညီသွားနိုင်ဖို့တော့ လီဗာပူးလ်ဘက်က လုပ်သင့်ပါတယ်”လို့ အိုဝင်က သုံးသပ်သွားပါတယ်။
BT Sport မှာ ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ အိုဝင်ကို တွဲဖက် ရီယို ဖာဒီနန်ကလည်း ထောက်ခံဆွေးနွေးသွားပြီး ဆာလားကို သူတောင်းတဲ့အတိုင်း ပေးလိုက်ရင် သူ့ရှေ့က မကြာခင်မှ စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ အဓိက ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဖာဘင်ညိုနဲ့ နောက်ခံလူ ထရင့် အလက်ဇန်းဒါး-အာနိုးလ်ဒ်တို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းနဲ့ လီဗာပူးလ်အနေနဲ့ အီဂျစ်သားကို အန်းဖီးလ်မှာ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသင့်ပေမယ့် တရားလွန်လိုက်လျောမှုမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
17 Sep နလေ့ညျခငျး နောကျဆုံးရ ခြဲလျဆီးသတငျးမြား စုစညျးမှု
နှဈဂိုးသှငျးပွီးမှ နိုငျပှဲကို လကျလှတျခဲ့ရတဲ့ သငျခနျးစာမယူတတျသူ ရော့ဂြားဈနဲ့ လကျစတာ